Accueil > Gazetin'ny nosy > Prefet Beryl : Hafindra fitsarana aty Antananarivo indray
Prefet Beryl : Hafindra fitsarana aty Antananarivo indray
Isan’ny mitazona ny sain’ny maro koa ankehitriny ny mahakasika ilay vato tany Ikalamavony izay nanjavona ka tsy hita ny ankamaroan’izany. Vola amin’ny miliara maro no voalaza fa tetibidin’ity vato sarobidy ity.
Tao anatin’ny iray volana mahery izao dia nitazona ny akom-baovao tao Fianarantsoa ny mahakasika azy ity. Isan’ny voarohirohy amin’ny fahaverezan’ny vato ny préfet ny faritra Matsiatra ambony antsoina hoe Beryl. Nesorina tamin’ny toerana ity olona ity ary nanaovana fanadihadiana tany amin’ny zandary tany Tsaramandroso tany Fianarantsoa. Misy olona hafa koa izay voalaza fa niaraka taminy nefa tsy voatazona ka nahagaga ny olona ihany koa izany. Afaka tapa-bolana taorian’izay dia nafindra tany Ambositra indray izy ka nampiandraiketana ny fitsarana tao Ambositra ny raharaha. Notazonina amin’ny toerana iray ao Ambositra ingahy Beryl amin’izao fotoana izao. Fantatra ary fa hampiakarina aty Antananarivo indray ny raharaha.
Raha ny loharanom-baovao mandeha amin’ity raharaha ity dia voalaza fa tsy azo gadraina na tazonina ao amin’ny toerana izay niasany ny mpiasam-panjakan ambony toa ny préfet ireto. Inona marina no antony tena itazonana ity olona ity ka andefasana azy mivezivezy toa izao? Manontany tena ny mpanaraka ny vaovao ity. Misy zavatra tsy mazava ao.